Filtrer les éléments par date : vendredi, 08 juin 2018
vendredi, 08 juin 2018 22:03
Sambava: Ankizivavy tsy ampy taona bevohokan’ny mpiara-miangona aminy
Mpianatra kilasy “4ème” ity solafaka raha nangolen’ny mpiara-miangona taminy ity. Tsy nahamarika na inona na inona ny mpitaiza aza, fa ny kibon-drazazavavy mibontsina no nanaitra azy, ka nampandrenesina ny ray aman-dreny niteraka ilay zaza avy ambanivohitra lavitra.
Teo no namboraka ny marina tamin’ny reniny ny nanjo azy ilay ankizy ary nanondro fa ny olona manana andraikitra lehibe sy masina ao am-piangonana no rain’ilay zaza ao an-kibony ity.
Nentina namonjy ny tobi-pahasalamana tao amin’ny CHRR Besopaka ilay zazavavy natao fitsapana ary voamarina fa efa ho valo volana ny vohoka.
vendredi, 08 juin 2018 21:45
Anosipatrana-Antananarivo: 4x4 Mitsubishi nitsoraka tany an-tanimbary
Nitrangana lozam-piarakodia teny Anosipatrana, Boriborintany faha-4 androany Zoma 08 jona 2018. Fiara tsy mataho-dalana marika Mitsubishi iray no niala ny arabe ka nitsoraka tany an-tanimbary.
Tsy nisy ny aina nafoy fa olona iray tao anaty fiara sy ny olona iray hafa tety amin’ny arabe no naratra ka nanaovana ny vonjy voina avy hatrany.
Nifarimbona tamin’izany famonjena izany ny mpamonjy voina avy amin’ny College Montmorency Canada sy ny tetsy Tsaralalana izay anatin’ny fotoana ifampizarana traikefa amin’izao fotoana izao.
vendredi, 08 juin 2018 21:24
Doany Tsararano-Mahajanga: Nifampitora-bato ireo samy taranaka ampanjaka
Nisavoritaka ireo samy taranaka ampanjaka teny amin'ny Doany Miarinarivo Efa-dahy Manankasina eny Tsararano ny tolakandron’ity zoma 8 jona 2018 ity. Raikitra ny fifampitoraham-bato ka raha tsy ny poa-basy tifi-danitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana tsy nampiparitaka ny roa tonta.
Mbola tohin'ny korontana ady seza sy fanoloana ny ampanjaka Soamody, izay mpitantana ity toerana fanompoana ity hatrany no anton'ny savorovoro. Hatramin'ny androany, tsy mbola tafiditra ny valamena ny tarik'i Rasamimanana izay voatendry hisolo toerana araka ny fifanarahan'ny samy taranaka ary namoahan'ny OMC fankatoavana.
vendredi, 08 juin 2018 21:23
Palais de Mahazoarivo: Ntsay Christian reçoit les parlementaires pro-régime
La recherche des solutions susceptibles de contribuer à l'apaisement de la situation et à l'instauration d'un climat propice à l'organisation des élections et la formation du nouveau gouvernement ont été au menu.
vendredi, 08 juin 2018 20:20
Toamasina: Nizar Pirbay kidnappé
Le patron de Business Center, Nizar Pirbay, dit "Zouzou", importateur, vient d'être kidnappé devant son domicile vers 18h30 à Toamasina ce vendredi 08 juin 2018.
vendredi, 08 juin 2018 14:33
Fianarantsoa: Niandraikitra ny tarika manao tantara tsangana ireo mpampianatra teny Frantsay
Nitombo ny isan'ny sekoly mandray anjara amin'ny fifaninanana tantara tsangana amin'ny teny frantsay avy eto Fianarantsoa, na dia eo aza ny toe-draharaha sy fitokonana tanterahan'ny mpanabe.
Miakatra hatrany amin'ny 28 ny isan’ireo toeram-pianarana nandefa solontena ireo eto Fianarantsoa sy distrika manodidina ary ny faritra hafa aty an-toerana.
Tanterahana eny amin'ny CAPR Mahamanina manomboka ity zoma 8 jiona ity ny fifanintsanana aty amin'ny faritra, ka hifarana ny sabotsy 9 jiona. Ho tanterahina any Antananarivo ny 19 jiona izao kosa ny dingana famaranana.
vendredi, 08 juin 2018 14:22
CEG Benoit Bevava Maevatanana: Mitaky ny hanesorana ny Tale ny mpampianatra
Mitokona ireo mpampianatra, mikatso ny fampianarana ao amin’ny CEG Benoit Bevava eto Maevatanana. Tondron’ireo mpitokona ho olon'ny HVM sy napetraka tamin’ny resaka politika ny Tale, ka takian’izy ireo ny hanesorana azy.
Voalaza fa efa nisy fanapahana noraisin’ireo ambaratongam-pifehezana ny fampianarana aty Betsiboka amin’ny hanala an'io Tale io mba hiverenan'ireo mpampianatra hiasa saingy misy solontenam-panjakana miaro azy.
Mikatso noho izany ny toe-draharaha, samy miziriziry ny andaniny sy ny ankilany.
vendredi, 08 juin 2018 14:10
Commune Urbaine Sambava: Ho lafo avokoa ny fananana iombonana eto
Namaky bantsilana ireo zavatra miteraka resabe eto Sambava, taorian’ny filazan’ny Ben’ny Tanànan’i Sambava, Toto François fa ho lasa avokoa ireo fananana iombonana eto an-toerana.
Nitsangana ny Ben’ny Tanàna lefitra Poty Robert ary nilaza fa tsy hanaiky izao gaboraraka izao ataon’ny lehibeny izao. Tsy niandry ela fa natomboka omaly alakamisy 07 jona 2018 avy hatrany ny fandravana ireo trano miisa roa nomena olona ambony iray ao amin’ny sampandraharahan’ny fahasalamana aty SAVA.
vendredi, 08 juin 2018 14:02
Ambositra: Nanao filaharambe nanodidina ny tanàna ny mpampianatra
Filaharambe mamakivaky ny tanàna androany zoma 8 jona no nanohizan’ny mpampianatra mpanabe ny fitakian’izy ireo, hanatsarana ny tontolon’ny fampianarana sy ny mpampianatra amin’ny ankapobeny.
Ireo mpampianatra mpiasam-panjakana ato Amoron'i Mania manontolo no manao karnavaly androany ary narahina mpitsoka mozika mihitsy izany.
vendredi, 08 juin 2018 13:58
Akademia miaramila any Etazonia: Tanora malagasy voatsonga telo hianatra any
Nampahafantarin’ny Mpiandraiki-draharaha Amerikana Stuart Wilson sy ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena malagasy omaly ireo tanora malagasy telo voafantina handrato fianarana amin’ny akademia miaramila any Etazonia.
Stania Charby Mpandresy, 21 taona, dia hiofana ao amin’ny Air Force Academy any Colorado Springs - Colorado.
Santa Andrianaivo, 19 taona, dia hianatra ao amin’ny Coast Guard Academy ao New London – Connecticut.
Ary Faniry William Tahiantsoa Andriamihaja, 20 taona, dia hiofana ao amin’ny Naval Academy ao Annapolis - Maryland.